Agoosto | 2016 | marqaati
Arkiifiyaha Billaha: Agoosto 2016
DOORASHOOYINKA 2016: HUBAAL LA’AAN
Iyadoo Soomaaliya ay isu diyaarineeyso in ay qabato doorashooyin dadban, kalsooni darrida lagu qabo geedi socodkan ayaa wuxuu hurinayaa dareenka niyad jabka ah iyadoo keeni karto in dalka uu dib ugu laabto jahwareer haddii aanan laga qeeyb galin geedi socodkan dhammaan jileyaasha siyaasadeed iyo kuwa bulsho, si uu geedi socodka u yeesho sharciyadda uu istaahilo.
Warbixintaan kooban ee doorashooyinka ku saabsan waxa uu ku saleeysan yahay wareeysiyo lala yeeshay shaqsiyaad ku warqabo geedi socodka doorashada iyo wadahadalada hoose ee socda.
Madaxda qaran waxa ay ku celceliyeen in doorashada ay dhici doonto xilliga loogu talo galay – iyagoo warbixino rasmi ah uga hadlay arrintan. Iyadoo saddex todobaad ka harsan tahay xilliga Baarlamaanka Soomaaliya, iyo lix todobaad xilliga madaxweynaha Soomaaliya, hay’adda Marqaati waxay ka walaacsan tahay in aysan jirin wax badan oo horumar ah oo muujinayo in ay dhacdo xil wareejis ku dhacda waqtigii loogu talo galay.
Musuqmaasuqa doorashada ee soo if baxaya
Hay’adda Marqaati waxa ay si wallaac ku dheehan ula socotaa geedi socodka doorashada, iyadoo xuseysa in lagu socdo waddo hore loo arkay oo ay qaadayaan shaqsiyaadka awoodda leh oo raba in xilalkooda ay sii heystaan.
Xisbiyada siyaasadda waxa ay u muujiyeen hay’adda Marqaati in Madasha Hoggaamiyeyaasha Qaran (MHQ), iyagoo aanan heysan sal dastuuri ah, aay ku xayuubsadeen awoodda iyagoo u dhaqmaya in ay yihiin guddi awoodda xoog ku heysta oo dikreeto. In kastoo arrinta MHQ loo arki karo in ay fududeeyneeyso geedi socodkan, xisbiyada siyaasadda waxa ay sheegeen in ay keeni karto in uu dalka qalalaaso galo, iyadoo laga cabsi qabo in MHQ ay sii wadaan in dalka ay ku maamulaan wadadaan aan dastuuriga aheyn xittaa doorashada kadib.
Qabaailada qaar ayaa sheegaya in dawladda ay bedeshay qaar ka mid ah 135ka oday dhaqameed ee metelaya beelaha Soomaaliyeed oo ay ku bedeshay kuwoo siyaasadeed ee aanan beelaha metelin. Marqaati waxa ay ka warqabtaa in ay jiraan ugu yaraan labo oday dhaqameed ee sax ah ee aanan ku jirin 135ta oday ee booskooda dad kale la geliyay.
Waxaa kaloo dheer in aysan jirin sinnaan iyo nafis xaga siyaasadda: xisbiyada siyaasadda waxaa loo diiday xoriyadda ah in ay qabsadaan shirar iyo banaan baxyo iyadoo arrimo amni lagu andacoonayo, shirar siyaasadeed ayaa laga hor istaagay, in fariimo siyaasadeed la baahiyo ayaa la diiday, iyo dadka u ololeeya xoriyadda – oo ay ka mid tahay Marqaati – ayaa la cabsi geliyaa, waa la handadaa, xarigne waa lagula kacaa.
Bulshada rayidka ayaa si gaar ah loo aamusiyay oo aanan laga qeeyb gelin geedi socodka, waxaana loo arkaa isla xisaabtanka dadka u ololeeya, gaar ahaan tan doorashooyinka, in ay qatar ku yihiin xisbiga tallada haya. Tani waxa ay keentay in ururada bulshada rayidka ah ay ka cabsadaan in doorashada ay ka hadlaan; marqaati waxay halkaan hogganka u qaadatay in ay hadalka bilowdo.
Madaxda MHQ ayaa ka dhageeysan doona guddiga doorashooyinka sida ay ku dhici karto doorashada iyo jadwalka doorashada; in kastoo guddiga uu si hoose u sheegayo in doorashada waqtigeeda ay dhici doonto oo halki xildhibaan ay soo xuli doonaan 51 qofood, warbixinada qaar ayaa sheegaya in laga yaabo in dib loo dhigo doorashada si waqti loo helo ama in nidaamki hore ee odayaasha la qaato haddii aysan suuroobin in dib loo dhigo.
Dib u dhigista doorashada waxa ay keeni doontaa in ay ka horyimaadaan xisbiyada siyaasadda oo hadda bilaabay in ay sheegaan in aysan aqoonsan doonin sharciyadda awoodda madaxweynaha hadii la dhaafo 10ka September. Dib u dhigis waxa ay keeni doontaa in qalalaase siyaasadeed la galo oo sidoo kale ay dhaawacanto sharciyadda dawladda Soomaaliya.
Khiyaarka labaad oo ah in gadaal loogu noqdo nidaamki hore ee fududaa wuxuu qatar ku yahay in uu dhaco musuqmaasuq ballaaran oo u dhigma kii 2012 markaas oo si cad loogu kala gadanayay kuraasta baarlamaanka.
Sidoo kale, in gadaal loogu noqdo nidaamki hore ee musuqa u nugul waxay micnaheeda noqon doontaa in afarti sano ee la soo dhaafay si buuxda ay u qasaarto ee aanan horumar dhicin. Sidoo kale, sharciyadda geedi socodka doorashada ayaa dhaawac culus gaari doona haddii lagu koobo doorashooyinka 135 oday.
In kastoo arrinta ay mugdi tahay, waxaa jiro wax yar oo rajo ah: saddex iyo labaatan xisbi siyaasadeed ayaa saxiixay Heshiiska Daacadnimada ee doorashooyinka Soomaaliya. Tani waa mid dhiiro gelin leh waxa ayna muujineeysaa rabitaan xaga xisbiyada siyaasadda ah oo ku aadan in ay tijaabiyaan in si daacad ah awood siyaasadeed lagu raadiyo; si kastaba ha ahaatee, waxaan ka niyad jabsan nahay oo aad uga wallaacsan nahay xisbiyo si bareer ah u diiday in Heshiiska Daacadnimada ay saxiixaan, kuwaas oo u horeeyo xisbiga tallada haya.
Tilaabooyinka loo baahan yahay
Dadka metela dadweynaha Soomaaliyeed – odayaasha, xisbiyada siyaasadda, iyo bulshada rayidka ah – waa in dowr laga siiyaa geedi socodka doorashada iyo jadwalka ay doorashada ku dhacayso. Geedi socod laga wada qeeyb galayo wuxuu xaqiijin doonaa sharciyadda geedi socodka laf ahaantiisa.
Beesha caalamka – US, UK, UN, EU, and AU – waa in ay la xisaabtamaan MHQ si ay u dhacdo doorashooyin xor ah. Looma arki doono doorashooyinka kuwoo dhexdhexaad ah haddii loo diido in ay is abaabulaan shaqsiyaad aanan ka tirsaneen MHQ, taasi oo ah xaq ku xusan dastuurka. Xubnaha MHQ ee isku daya in ay geedi socodka u leexiyaan si ay uga faa’iideeystaan waa in ay ogaadaan in lala xisaabtami doono si loo badbaadiyo ammaanadda geedi socodka.
Waa in ay jirtaa jadwal cad oo ay ka muuqato degdegnimo oona ku salaysan tallooyinka dadka hore aan u soo xusnay ee metela dadweynaha Soomaaliyeed, si loo xaqiijiyo in geedi socodka uu yeesho dhammaad lagu wada qanacsan yahay.
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Agoosto 3, 2016 uu qoray Maxamed Mubarak.